Ukuze wenze i-yogurt ephansi fat, kufanele uthenge fresh noma ubisi pasteurized nge lokucuketfwe fat ubuncane. Kuyaphawuleka ukuthi kuze kube yimanje, ukulungiswa ongakhetha ezinjalo zikhona okukhona eziningi kangaka. Wenziwe ngosizo yogurt, microwave, Multivarki namanye amadivayisi. Kodwa kulesi sihloko sanquma ukuhlola indlela elula futhi esheshayo ukuthi ingakwazi ngisho imfundamakhwela umpheki.
Indlela ukupheka yogurt ephansi fat?
Umbuzo namuhla akuyona ahlobene emashumini ambalwa eminyaka edlule. Phela, ngenxa yokufuna a zokudla okumnandi olumnandi kangaka kudingeka kuphela ukuya esitolo. Kodwa akubona bonke yogurts zidayiswa ezinkulu, ziwusizo ukuze umzimba wethu. Yingakho abanye besifazane namanje ukulungiselela lesi sidlo ekhaya.
Ake sibheke ukuthi ukudla udinga ukuthenga ukwenza akho ephansi fat yogurt:
fresh noma pasteurized okuqukethwe ubisi ubuncane amafutha (1.5%) - 1 L;
ubisi skimmed powder - ¼ inkomishi;
ushukela isihlabathi (elisho "Udla" acidosis acid amagciwane) - 1 spoon ezinkulu;
usawoti omncane - schepotochka;
yogurt Yemvelo -ngihlangane namasiko amaningi bukhoma (ngaphandle izithasiselo kanye udayi) - 2 ephelele spoon ezinkulu (ungakwazi futhi usebenzise lyophilized nhlama ebilisiwe ezomile).
Homemade ephansi fat yogurt yenziwa ngezigaba ezintathu. Okokuqala sidinga ukulungisa isisekelo. Ukuze lokhu kufanele pasteurized ukuba uthele ubisi esitsheni metal futhi kancane kancane kuba eliwu lokushisa 45 ° C. Uma usebenzisa isiphuzo fresh, kunconywa ukuthi wena usiyise ngamathumba, asuse ifilimu, futhi kuphela bese usebenzisa abandayo ukuze izibalo ezishiwo. Lokhu kumele kwenziwe ngamanzi abandayo, ubhapathizelani phansi epanini ugovuze okuqukethwe kahle. Futhi kule isiphuzo, kuyinto efiselekayo ukwengeza ¼ inkomishi dry skimmed ubisi. Uyokwenza yogurt mkhulu, futhi sinempilo.
Nakuba selehlile ubisi abilisiwe, ukuziqalela kufanele sekuqala ukufudumala egumbini lokushisa. Kuze kube yimanje, it is kuphela edingekayo ukuze uthole kusukela gumbi esiqandisini ume egumbini amahora ambalwa. Ngokulandelayo, efudumele ephansi fat yogurt noma amagciwane ezomile lyophilized e flakonchike kufanele ayifake ubisi uhlanganise kahle (ungasebenzisa mixer).
Isigaba sokugcina - ijubane yesivalo ngesikhathi sokushisa
Uma isisekelo okukhona esizayo uzolunga, kufanele batheleka embizeni ezintathu-litre futhi uvalwe uvale lid ingilazi. Okulandelayo esitsheni nenye edingekayo ukugoqa Quilt wafaka eduze yimuphi umthombo ukushisa. Ngokwesibonelo, ebusika embizeni nge webele mass zingafakwa eduze ibhethri noma ezivamile uthele thermos. Okubalulekile kulokhu - khumbula ukuthi amafutha ongaphakeme iyogathi yemvelo kumelwe nakanjani kumele zigcinwe zikhona ezingeni lokushisa hhayi ngenhla 50 nangaphansi 30 ° C.
Ekupheleni amahora 4-7 kufanele uthole umkhiqizo kabani ukuthungwa sifana luphuzi, kodwa iphunga ushizi uketshezi oluncane liluhlazana noma aphuzi phezu. Lokhu ngokunembile iyona mass ukuthi sidinga. Kuyaphawuleka ikakhulukazi ukuthi eside ephansi fat yogurt kuyoba efudumele futhi selivuthiwe, mkhulu futhi tastier kuba. Phakathi ukudalwa umkhiqizo ezifana kubaluleke kakhulu hhayi ukuhambisa isitsha ubisi lwebhodlela, njengoba le iyehlisa ngesilinganiso ukuqina yayo.
Ngemva yogurt uqweqwe bese uzolunga, kufanele ngqo efakwa embizeni ingilazi egumbini imbala, lapho zingagcinwa amasonto amabili. Khonza lokhu isiphuzo ukuba itafula Kunconywa, kanye noshukela amajikijolo. Uma wayefisa, lesi sidlo Ungaphinde ungeze ambalwa spoonfuls uju liquid futhi ingcosana nesinamoni.
Uma udinga ukusebenzisa ethile yogurt okuzenzela njengoba imvubelo, ukwenza lokhu, kuyinto efiselekayo ngezinsuku zokuqala 5-8, kuyilapho acidosis acid amagciwane eziba kulezi zindawo zenza. Ngaphezu kwalokho, kwakhiwa phezu umkhiqizo whey kokuba abe luhlaza ogqamile aphuzi, kufanele ngokushesha likhanyelwe noma esetshenziselwa kokuxova inhlama, amasaladi kanye nokunye okufana nalokho. D.
thickeners Ngokujwayelekile, yogurts eziningi edayiswa nezitolo ezinkulu, abakhiqizi ehlukahlukene Ungeze (isitashi, pectin, gelatin, njll). Ngakho-ke, akusona isimanga futhi ukhathazeke ize uma umkhiqizo yobisi owenzwe nguwe Ubuyisé zamanzi.
Ayo bagxila: Ukwahlukanisa nobuchwepheshe zokukhiqiza
Ukupheka esikhwameni noma uthandaze? Kungani iphupho ubomvu?
Iyini i-PMS emantombazaneni, futhi yiziphi izimpawu zayo?
Calcium Gluconate: ukubuyekezwa. Calcium gluconate intramuscularly - Izibuyekezo
Kungani ukuphupha ngani amabhere: isifiso ukuncintisana
Amabhethri ane-alikhali: izici ezisebenza